क्वारेन्टाइनमा बसेका युवकको मृत्यु – Khabar Silo
नेपालगन्ज : बाँकेको नरैनापुरमा क्वारेन्टाइनमा बसेका एक युवकको मृत्यु भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय भगवानपुरका इन्चार्ज इन्सपेक्टर मानबहादुर विसीका अनुसार नरैनापुर ५ को दीपेन्द्र प्राविको क्वारेन्टाइनमा बसेका २५ वर्षका युवकको आइतबार बिहान ६:४० बजेतिर मृत्यु भएको हो। उनले बिहान ५:३० बजेतिर बान्ता गरेका थिए।
काठमाडौं, १५ असार । संक्रमितहरु अझ बढ्न थालेको र काठमाडौं उपत्यकामा समेत संक्रमित थपिन थालेपछि जोखिम बढेको भन्दै सरकारले लकडाउनलाई कडाई गर्ने भएको छ । कोभिड १९ संक्रमण व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को सोमबार बसेको बैठकमा लकडाउनको बारेमा समीक्षा गर्दै यस्लाई कडाई नगरिए जोखिम थामिनसक्नु अवस्थामा पुग्न सक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । सडक र पसल एवं […]
नायिका बर्षा शिवाकोटीले भागरथीको न्या,यकोलागी आफ्नो भावना राखेकी छिन तर उनले अहिलेको राजनीतिक अस्थिरतालाई पनि ब्य,ङग यसरि गरेकी छिन । हेरौ उनको स्टाटस जस्ताको तस्तै “नारीलाई भगवान मानेर पूज्ने मेरो देशमा आज नारी स्वयं सुरक्षित छैनन्। निर्मला र सम्झना जस्तै भागीरथीले पनि न्या,य पाउँदिनन् त ? के यति अ,सक्षम छ हाम्रो न्यायपालिका ? के यति […]
कचनकवलका १५ सहित झापामा थपिए १७ कोरोना संक्रमित
बुधाबार झापामा १७ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा १७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालकी डा. संगिता मिश्रले जानकारी दिइन्। संक्रमितमध्ये १५ जना केचनकवल गाउँपालिकाका छन्। उनीहरू भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका थिए। बाँकी दुई जना भने गौरादह नगरपालिकाका छन्। योसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या ८ सय ४२ पुगेको छ। बुधबार […]
साउदीबाट फर्केको ६६ औँ दिनमा को रोना पुष्टि, गाउँभरी त्रा स